रामधुनी नगरपालिका वडा नं. ५ को योजनाहरु सफल कार्यान्बयन -
रामधुनी नगरपालिका वडा नं. ५ को योजनाहरु सफल कार्यान्बयन
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र ०४, २०७४ समय: ३:१२:४७
झुम्का,चैत्र ४ । रामधुनी नगरपालिकाले बजेट,निति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्बयन तथा सेवा प्रवाहको अवस्थाकोबारेमा आज सार्वजानिक सुनवाई गर्ने भएको छ । रामधुनी नगरपालिकाको कार्यालयले आ.ब. २०७४÷७५ मा हाल सम्म सञ्चालन भएको र सञ्चालित बिकास योजना तथा कार्यक्रमहरुको सार्वजानिक सुनुवाई गर्ने भएको हो ।
यसैक्रम्मा रामधुनी नगरपालिका ५ नं. वडा समितिको कार्यालयले जनसहभागीता सहितको रकम रु ३ करोड भन्दाबढी योजना निश्चत समय अवधिमै समपन्न गरेको देखिएको छ । पूर्वाधार बिकास निर्माणमा यस वडाले बाटो,सडक कालो पत्रे,पक्की नला निर्माण,सामुदायीक भवन निर्माण, वडावासीमा सिप बिकास सम्बन्धि तालिम सञ्चालगरीएको छ । केही योजनामात्र सञ्चालनमा रहेको छ प्राय सबै सम्मपन्न गरीसकिएको मुल्याङ्कमा आएको छ । वडा नं. ५ को वडाकार्यालयबाट आपनो योजना अनुरुप बैशाख १५ गते सम्म सम्पुर्ण योजना सम्मपन्न गर्ने वडा अध्यक्ष डेगराज फुयालले बताए ।
रामधुनी नगरपालिकाको ९ वटा वडा मध्ये नंं. ५ नम्बर वडा सबैभन्दा सानो ०.९१ बर्गमिटर क्षेत्रफल भएको वडा हो । वडा मध्येको जनसंख्याका हिसाबले चौथो स्थानमा रहेको यस वडामा १ हजार ३ सय ६८ घरधुरी रहेको छ । ६ हजार २ सय २६ जनसंख्या भएको यस वडामा महिला ३ हजार १ सय ४९ र ३ हजार ७७ जना पुरुष रहेका छन् । नोकरी र ब्यवसाय पेशामा बिशेष यस वडाकावासीहरु आबद्ध रहेका छन । यो वडा पूर्वपश्चिम राजमार्ग उत्तर रहेको दक्षिणमा झुम्का कारागार, पूर्व राजु चिउरामिल र पश्चिम क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्रसम्म फैलिएको छ । स्थानीय चुनावबाट यस वडामा वडा अध्यक्षमा डेगराज फुयाल निर्वाचित भए । वडा सदस्यहरुमा महिला वडा सदस्यमा साधना थरुनी, दलित महिला सदस्यमा मनोदेवि सरदार त्यस्तै वडा सदस्यमा नन्दराज फुयाल र भरतराज नेपाल चयन भए । कार्यपालिका सदस्यमा यस वडाबाट रामकरण खड्गा निर्वाचित भए ।
यस वडामा रामधुनी नगरपालिकाको मुख्य केन्द्र झुम्का बजार रहेको छ । बजार ब्यवस्थापन र बिस्तारकालागी योजनाहरु ल्याइरहेका छन् । राजमार्गमा दुर्घटना न्युनिकरणकालागी छेउछाउका फुटपाथ पसल हटाएर फरकीला बनाएका छन् । ढलनिकासकालगी सरसफाई अभियान चलाउदै राजमार्ग छेउको माटो सम्याएका छन् । साक्षरता प्रतिशत ९६.०७ रहेको यस वडामा शतप्रतिशत साक्षर बनाउने योजनाहरु रहेको छ । यस वडामा १० वटा निजी माबि बिद्यालय र ४ आधारभुत बिधयालय गरी १४ वटा रहेका छन्, २ वटा बालबिकास केन्द्रमा डाकिन थान वालविकास र मनकामना वालविकास केन्द्र रहेको छ । योजनाअनुसार वडालाई पुर्ण सरसफाई घोषणाका लागि बिभिन्न टोल संस्थालाई घोषणा गर्दै लगिएको छ । २२ वटा टोल बिकासमा बिभाजित १६ वटा टोल बिकास संस्था पुर्ण सरसफाई घोषणा भईसकेको छ भने ६ वटा बाँकि रहेको छ । वडा नै पुर्ण सरसफाईका लागि करिब अन्तिम चरणमा छ ।
झण्डै दुई दशकपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थितीमा बिभिन्न बिकासका योजनाहरु सञ्चालन भैरहेको छ । गठन भएको रामधुनी नगरपालिकाको नगर सभामा आ. व २०७४÷०७५ को बार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत सभाबाट वडा नं.५ मा रु १ करोड ८२ लाख रकम बिनियोजन गरियो जस्मा चालु खर्च रु २० लाख, लक्षित समुहका लागि रु २१ लाख ५० हजार बिनियोजित रकम रहयो भने बाँकी बिकास निर्माणमा रकम छुट्याएको हो । आर्थिक बर्ष सुरुदेखिको हालसम्म सञ्चालित र सम्पन्न काम जनसहभागीता सहित रु ३ करोडभन्दा माथीको कार्य भएको छ । सिफारीस दस्तुरबाट २ लाख १८ हजार २ सय ५० रुपैया संकलन समेत गरेको छ ।
वडा कार्यालयबाट लक्षित बर्गका लागि गरेका योजनाका कार्यहरु समेत बिभिन्न समयमा सम्पन्न गरेको छ । बालबालिका मैत्रि वडा घोषणाका लागि बालमैत्रि स्थानीय शासन सम्बन्धि अभिमुखिकरण, करेसाबारी तथा कौसी खेती तालिम, खेलकुद सामग्री बितरण, डाकिन थान वालबिकास केन्द्रलाई तिन कक्षा सम्म बनोने पहल गर्ने, जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य शिविर, सम्मान तथा औषधि बितरण,लोक सेवा तायरी कक्षा सञ्चाल १५ जनाको सहभागीतामा सम्पन्न भएको छ भने बिभिन्न जातजातिका कला, संस्कृति संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि सहयोग,कम्प्युटर तालिम सञ्चालन भईरहेको छ । त्यसैगरी जाडोमा दलित बस्तिमा ९२ थान न्यानो कपडा र कम्बल बितरण र बर्षामा बाढि पीडित ८० परिवारलाई भाँडाकुडालगायत आवश्यक सामग्री दैबिक प्रकोप उद्धार समितिको सहकार्यमा बितरण भएको हो ।
यो वर्ष हामी जनप्रतिनिधिहरु सम्पूर्ण वडा वासीसँग वडाको समुचित विकास, सरसफाई, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, पर्यटनका विकास, बजार ब्यवस्थापनसहित विकास निर्माण काममा हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत वडा अध्यक्ष फुयाले बताउनु भयो ।
यस वडामा बिभिन्न योजनाहरु सञ्चालित तथा सम्पन्न भएको
१) पूर्वाधार बिकास निर्माणमा त्रिलोक मार्ग निर्माणका लागि त्रिलोक मार्ग निर्माण उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ । सो उपभोक्ता समितिबाट रु ६० हजार जनसहभागितामा नगरपालिकाबाट रु ३ लाख रकमबाट २०७४÷७÷१५ सम्झौता भई २०७४÷१०÷१५ गते सम्पन्न भएको छ ।
२) डाकिनथान मार्ग बाटोलाई निर्माण कार्य नगरपालिकाको रु १० लाख र उपभोक्ता जनसहभागिताको रु २ लाख रकमबाट सम्पन्न भई सकेको छ । २०७४÷७÷१६ सम्झौता भई २०७४ माघ मसान्तसम्म सम्पन्न भएको हो ।
३) डंग्राही पोखरीमा पक्की नाला निर्माण सम्पन्न भएको छ । उपभोक्ता जनसहभागिताबाट रु १ लाख र नगरपालिकाबाट रु ५ लाख रकमले २०७४÷७÷१६ सम्झौता भई २०७४माघ मसान्तसम्म सम्पन्न भएको हो ।
४) नगरपालिकाको रु ४ लाख रकमले र जन सहभागीतामा रु ८० हजारबाट बिजुली अफिस मार्ग पक्की नाला निर्माण २०७४÷७÷१९ सम्झौता भई २०७४माघ मसान्तसम्म सम्पन्न भएको छ ।
५) ईन्द्रेणी टोल बिकास क्षेत्रमा पक्कीनाला निर्माण भएको छ । रु १० लाख नगरपालिकाबाट रकम र जनसहभागिता रु २ लाख बाट २०७४÷७÷२० सम्झौता भई २०७४माघ मसान्तसम्म सम्पन्न भएको हो ।
६) गारीया टोल बिकास संस्थामा पक्की नाला निर्माणका लागि रु २ लाख नगरपालिकाबाट र जन सहभागीताबाट ४० हजारले २०७४÷७÷२१ सम्झौता भई २०७४माघ मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
७) आमा समुह सामुदायीक भवन निर्माणका लागि नगरपालिकाबाट रु ३ लाख र जनसहभागिको ६० हजार रकमले निर्माण कार्य सञ्चालनमा रहेको छ ।
८) प्रगती मार्गका लागि पक्की नाला निर्माणमा नगरपालिकाबाट रु १ लाख र जन सहभागीताबाट २० हजारले २०७४÷७÷१९ सम्झौता भई २०७४माघ मसान्तसम्म सम्पन्न भएको हो ।
९) भानु नगर टोल बिकासमा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । नगरपालिकामा रु २ लाख र जनसहभागीबाट ४० हजारले निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
१०) बुद्ध मार्ग पक्कीनाला निर्माण सम्पन्न भएको छ । रु ३ लाख नगरपालिका र ६० हजार जनसहभागीबाट २०७४÷७÷२६ सम्झौता भई २०७४माघ मसान्तसम्म सम्पन्न भएको हो ।
११) सुगम मार्गमा पक्की नाला निर्माणका लागि रु १ लाख ५० हजार नगरपालिकाबाट र ३० हजार जनसहभागीतामा पक्की नाला निर्माण गरीएको छ ।
१२) पक्की नाला निर्माणका लागि सुगम मार्ग हुँदै रेडक्रस जोड्ने बाटोको पक्कि नाला निर्माण सम्पन्न भएको छ । नगरपालिकाबाट १ लाख ५० हजार र जन सहभागीताबाट ३० हजार गरी निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
१३) डाकिन थान धर्मशाला भवन निर्माणका लागि जेष्ठनागरिकको रकमले रु ५० हजार र जन सहभागीतामा १० हजारले निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो ।
१४) श्री रामजानकी मार्ग निर्माणका लागि नगरपालिकाबाट ८ लाख र जन सहभागीताबाट रु १ लाख ६० हजार रकमले पक्की सडक निर्माण सञ्चालनमा रहेको छ ।
१५) लाली गुराँस टोल बिकासमा पक्की नाला निर्माणका लागि नगरपालिकाबाट रु २ लाख र जन सहभागीताबाट ४० हजारले २०७४÷७÷३० सम्झौता भई २०७४ फाल्गुन मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
१६) हालमा लगौना चौकदेखि शिव मन्दिर हुँदै पूर्व चिउरा मिलसम्म कालो पत्रे काम सञ्चालनमा रहेको छ । यसको रकम नगरपालिकाबाट रु १७ लाख छन् । यो योजना २०७४÷९÷१२ सम्झौता भई २०७४ चैत्र मसान्तसम्म सम्पन्न भएको हो ।
१७) महिला सहकारी भवन निर्माणका लागि नगरपालिकाबाट रु ४ लाखबाट भवन निर्माण भईरहेको छ । महिला लक्षितको रकमबाट निर्माण भईरहेको हो ।
१८) परियारपुर शिव मनिदर पश्चिम पिप्राहा फिल्डसम्म बाटोमा पक्की नाला रु ५ लाख नगरपालिकाको रकमले २०७४÷९÷१२ सम्झौता भई २०७४ चैत्र मसान्तसम्म सम्पन्न हुने भएको समय अवधि रहेको छ ।
१९) मोती मार्ग बाटो ग्राभेल रु १ लाख रकमले निर्माण भईसकेको छ ।
२०) वयरवन टोल बिकासमा शान्ति मार्गमा कालो पत्रे निर्माण भईरहेको छ । नगरपालिकाको रु १० लाख र जन सहभागीताबाट २ लाख रकमले २०७४÷१०÷०३ सम्झौता भई २०७५बैशाख मसान्तसम्म सम्पन्न भएको हो ।
२१) नगरपालिकाको १० लाखको रकमबाट हसनपुरदेखि शंकरपुर नहरसम्म बाटो कालो पत्रेकालागी सञ्चालनमा रहेको छ ।
२२) ज्योती मार्गमा पक्की नाला निर्माण भईरहेको छ । नगरपालिकाको रु १ लाख ५० हजार र रु ३० हजार जन सहभागीतामा सम्पन्न भई सकेको छ ।
२३) भानु नगर टोल बिकासमा बाटो ग्राभेल कार्य २०७४÷१०÷२४ मा सम्झौता भई २०७४÷११÷१५ मसान्तसम्म सम्पन्न भएको हो । नगरपालिकाको रु २ लाख र रु ४० हजारको जन सहभागीताबाट सम्पन्न भएको छ ।
२४) पक्की बाटो निर्माण लालीगुराँस मार्गका लागि नगरपालिकाबाट रु ५ लाख र जनसहभागीताबाट रु १ लाखबाट २०७४÷१०÷१२ सम्झौता भई २०७४÷१२÷१५ सम्म सम्पन्न भएको हो ।
२५) शान्ति पथ निर्माण समिति झुम्कामा रु १० लाखबाट नगरपालिबाट र जन सहभागीताबाट रु २ लाखले २०७४÷९÷११ सम्झौता भई २०७४चैत्र मसान्तसम्म सम्पन्न भएको हो ।
२६) वडा नं. ५ मा पर्ने रामधुनी जोडने सडक निर्माण १ लाख ५० हजार र जनसहभागी ३० हजार रकमले २०७४÷१२÷०२ सम्झौता भई २०७५÷१÷३० मा सम्पन्न भएको हो ।